११ हजार नायब सुब्बा र खरिदारको समायोजन | Tungoon
काठमाडौं । सरकारले ११ हजार ८३ जना नायब सुब्बा र खरिदारको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिलेसम्म नायब सुब्बा र खरिदार गरी ११ हजार ८३ जनाको सूची सार्वजनिक गरेको हो।
त्यस्तै समायोजन भएका प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहका चार हजार ६ सय ६ जना खरिदारमध्ये संघमा तीन हजार एक सय १४, प्रदेशमा तीन सय ७८ र एक हजार एक सय १४ जनाले स्थानीय तह रोजेका छन्। संघमा समायोजन भएका स्थानीय तथा प्रदेश तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई तत्काल रमाना नदिइने भएको छ। संघमा समायोजन भए पनि तत्काल रमाना नदिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। तर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
Previousविद्यालय शिक्षकको मापदण्ड तोकियो, पाँचवर्षभित्र योग्यता पुर्याउनै पर्ने
Nextनिर्मलाको डीएनए किन पठाउने अमेरिका ?
दक्षिण एसियाकै ठूलो सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा
जिन्दगीभरको मेहनतले’ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घरमा आगो लगाईयो – पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई
मुलुकभर वर्षा हुने सम्भावना